I-Semalt Expert ichaza iinketho kwi-HTML Scraping
Kukho ulwazi oluthe xaxa kwi-intanethi kunokuba nayiphi na umntu angayifumana ngexesha lokuphila. Iiwebhusayithi zibhalwa nge HTML, kwaye iphepha ngalinye lewebhu lihlelwe ngeekhowudi ezithile. Iiwebhusayithi ezahlukeneyo ezingabonakaliyo zinikeza iinkcukacha kwiifom ze-CSV ne-JSON kwaye zenze kube nzima ukuba sikhiphe ulwazi ngokufanelekileyo. Ukuba ufuna ukukhipha idatha kumaphepha e-HTML, ezi ndlela zilandelayo zifanelekileyo kakhulu.
I-LXML yilayibrari eninzi ebhaliweyo yokuchonga amaxwebhu e-HTML kunye ne-XML ngokukhawuleza - umzugsfirma dã¼bendorf.Iyakwazi ukuphatha inani elikhulu lamathegi, amaxwebhu e-HTML kwaye ufumana iziphumo ezifunayo kumcimbi wamaminithi. Sifanele sizithumele Izicelo kwiimodyuli ze-urllib2 esaziwayo ngokuzifundela kwayo kunye neziphumo ezichanekileyo.
I-Soup Beautiful iyincwadi yamathala e-Python eyenzelwe iiprojekthi ezijikelezayo ngokukhawuleza ezifana nokuchithwa kweenkcukacha kunye nemigodi yomxholo. Iguqule ngokuzenzekelayo amaxwebhu angenayo kwi-Unicode kunye namaxwebhu aphumayo kwi-UTF. Awudingi naziphi na izakhono zeprogram, kodwa ulwazi oluyisiseko lweikhowudi ze-HTML luya kulondoloza ixesha lakho namandla. Isidlo esihle sichaza nayiphi na incwadi kwaye yenza umgubo wemizi kubasebenzisi bayo. Idatha eyigugu efihliweyo kwisayithi engacwangciswanga kakubi inokukhishwa ngolu khetho. Kwakhona, i-Beautiful Soup yenza inqwaba yemisebenzi yokuqhawula imizuzu embalwa kwaye ikufumana idatha evela kumaphepha e-HTML. Ilayisenisi yi-MIT kwaye isebenza kwiPython 2 nePython 3.
Isikratshi isakhelo esiphezulu esiphezulu senkcazelo yokukhangela idatha oyifunayo kumaphepha ahlukeneyo ewebhu. Kuyaziwa kakhulu ngeendlela zayo ezakhelwe kunye nezinto ezibanzi. Nge-Scrapy, unokwenza lula ukukhipha idatha esuka kwinani elikhulu lamasayithi kwaye akudingi naziphi izakhono ezikhethekileyo zokubhala. Ingenisa idatha yakho kwiifayile zeGoogle Drayivu, i-JSON, kunye ne-CSV ngokufanelekileyo kwaye igcina ixesha elide. I-Scrapy yindlela efanelekileyo yokungenisa. io kunye ne-Kimono Labs.
I-PHP I-HTML DOM I-Parser elula:
Ukuvunwa kwewebhsayithi ngumthombo ovulekileyo wenkonzo yokukhangela kwi-Java. Iqokelela, iququzelele kwaye ifake idilesi kumaphepha ewebhu afunwayo. Izivuno zewebhu zokuqulunqa ubuchule kunye nobuchwepheshe be-XML ukuphathwa njengamazwi aqhelekileyo, i-XSLT kunye ne-XQuery. Ijolise kwiwebhusayithi ye-HTML kunye ne-XML kunye neenkcukacha ze-scrapes ezivela kubo ngaphandle kokunciphisa umgangatho. Ukuvunwa kwewebhu kungenza inamba enkulu yamakhasi ewebhu ngeyure kwaye ixhaswa ngamathala eencwadi aseJava. Le nkonzo idume kakhulu kwiimpawu zayo ezifanelekileyo kunye nokukhangela okukhulu.
IJeriko I-HTML I-Parser:
IJeriko i-HTML I-Parser yilayibrari yeJava evumela ukuba sihlaziye kwaye sisebenzise iifayile ze-HTML. Lona lukhetho olunzulu kwaye luqale lwaqaliswa ngo-2014 yi-Eclipse Public. Ungasebenzisa iJeriko i-HTML yomsebenzisi ngeenjongo zorhwebo kunye nonjongo zorhwebo.